The chikuru eMagwaro KJV chinotsigirwa zvekare | Apg29
The chikuru eMagwaro KJV chinotsigirwa zvekare
By Bo Hagstedt, sachigaro, André Juthe ph. D. Swedish KJV.
Nyaya ino inoratidza mienzaniso yakajeka sei kusarudzwa itsva inokosha chinyorwa akaenda.
→ Download nyaya sechinhu PDF faira.
Nyaya ino inoratidza mienzaniso yakajeka sei kusarudzwa itsva inokosha chinyorwa akaenda. Gumi Mienzaniso zviri munyaya ino pfungwa anosanganisira:
The chikuru eMagwaro KJV, Received Text, ane rutsigiro kubva kare mumanyoro chokuArekizandiria.
Varume vashanu, uyo akatipa itsva inokosha rugwaro, akanga kusada kuti Byzantine rwezuva.
Chokwadi kuti vakawanda vavo vaifunga kuti Evhangeri yepakutanga vakapararira nomuromo. It akamuka apo mhosva iri zvokuudzwa nomuromo, iyo kereke ipapo kugadziriswa. Ivo vakati Byzantine rugwaro rwuri akazotevera Ecclesiastical chinyorwa iyo akaruramisa zvikanganiso vaivapo kubva pakutanga.
Kuti kana chete manyoro faira kusanganisira zvekare, anopa rutsigiro zvakarurama mashoko saka vakasarudza kururama, nekuti vaitenda kuti mhosva paiva kubva pakutanga Church kubva kugadziriswa. Asi nokushanda uyu zvachose unbiblical, nekuti zvanzi naJehovha kuti Rugwaro rwose akafemerwa naMwari, uye kuti anofanira kuramba shoko rake.
Aila Annala nharo kuti yekare inokosha rugwaro kubva 1500s, Received Text kwakavakirwa mumanyoro 900-1200 remakore. Zvisinei, ichi Manyepo akaoma musoro. Chokwadi ndechokuti Received Text iri kwakavakirwa manyoro ekare, iyo nyaya ino kucharatidza. Isu muna KJV vanodavira kuti Magwaro Matsvene uye zvinokosha rugwaro hwaponeswa kusvikira zuva redu kuburikidza raMwari nokutungamirira.
Vamwe nguva kare, Aila Annala, vakakurumbira mushanduri nuBibeln, imwe nyaya iri The World Today apo iye waitsigira kuti isu vaKristu havafaniri nharo pamusoro Gwaro. Anoti kuSweden tine shanduro yakanaka dzakawanda kunyange tiri diki uye de-wechiKristu nyika uye kuti shanduro idzi dzinopindirana. Aila akazvidemba kuti vamwe vanhu mhosva Bhaibheri muna 2000 kuti vachiedza kuparadza nouMwari Kristu. Iye rinotiwo kuti shanduro vatsva inobva itsva inokosha rwezuva 1970 vangangowedzera kuita nani nokuda kuti ikozvino tine mapindiro zvikuru kune mumanyoro ekare.
Isu kubva Swedish KJV ane maonero akasiyana. Hazvisi mukwanisi shanduro dzakasiyana nezvinotaurwa dzidziso dzechiKristu dzinokosha. Hatina nharo pamusoro Holy Scriptures, asi Ukuwo, tinoda vadzivirire Magwaro Matsvene dzaro zvinokosha rugwaro, tinotenda, maererano nokutungamirira kwaMwari hwaponeswa kuti nguva yedu. Kuti Mwari aizoita achengetedze Shoko rake uchapupu hwakajeka yeBhaibheri pachake (Isaya 40: 8. Neh. 8: 8. Pisarema 12: 6-7, 119: 152nd Matthew 5:18 Lk 16:17 VaR 15:.... 4 . 1 Pt 1: 23-25.). Zvaisazova zvakaoma chaizvo kuvimba neBhaibheri kana taisagona kuvimba wenyaya yacho zvichengeteke. Tinoziva sei kuti muenzaniso kuti hapana remangwana kuwanikwa muzvinyorwa vakura kuti vari kupfuura kunyange rakapfupikiswa kupfuura chokuArekizandiria rugwaro anoita rugwaro zvino tinotenda ishoko raMwari, haasi ikoko? Pakupedzisira, shoko rose raMwari vasanyanya.
The Bible muna 2000 akazoita nouMwari Kristu haisi mhosva utsinye, asi chete chokwadi vakatendeseka. Zvaringana kuverenga muRoma. 1: 4, apo muna 2000 Bhaibheri rinoti Jesu akagadzwa saMambo waMwari nokumutswa kwake kubva kuvakafa. Asi Jesu haana kuudzwa kuti Mwanakomana waMwari nokumutswa kwake - akazvarwa sezvo mwanakomana waMwari uye aiva mwanakomana waMwari muupenyu hwake, rufu rwake, kumuka kwake uye nekusingaperi. Uyezve, Jesu anonzi Mwanakomana waMwari ane diki ndebvu, uye kana rimwe zuva Pfugamai ndokureurura Jesu saShe, Phil. 2:11, anonyora jendurumani pamwe H duku, apo kushevedza Peter dombo ane guru C muna Matt. 16:18.
Aila anoti izvozvo FNns chinyorwa muna Mabasa. 9: 6 iyo yebhasera Received Text. Hazvina zvakarurama kuti anotevera mashoko muna Mabasa. 9: 5-6 chinoshayikwa mumanyoro dzakawanda Greek:
Ndima 5. "Zvakaoma kuti kukava zvibayo." Ichokwadi kuti mashoko aya kupotsa mumanyoro dzakawanda Greek asi ivo FNns pamwechete Manyoro ekare Latin, Vulgate. Mashoko vari muna reSiriya Peshitta mipumburu uye muzvinyorwa zvechiGiriki, bumbiro E, uye 431, asi mundima mana pachinzvimbo. Uyezve FNns mashoko muzvinyorwa zvose zvechiGiriki Mabasa. 26:14.
Ndima 6. "Zvose achidedera uye nekushamisika wakati: Ishe, chii chamunoda kuti ndiite? Zvino Ishe akati kwaari. "Mashoko aya uyewo asina mipumburu yakawanda yechiGiriki asi sezvinoita mashoko mundima 5 FNns dzakawanda zvinyorwa rweLatin, Vulgate, uye mune dzimwe muSiriya uye Coptic neshanduro yekare. Mukuwedzera FNns ava mashoko muzvinyorwa zvose zvechiGiriki sezvinoita mashoko v5 mune imwe nzvimbo iri mubhuku raMabasa (Mabasa. 22:10).
Chinonyanya kukosha kusimbisa mashoko ndima 5 uye 6 zvechokwadi kunosimbiswazve nemashoko Holy Scriptures, nokuda chete rugwaro mune mamwe nzvimbo mbiri Mabasa, Acts. 22:10, uye 26:14.
Kana kuwana zvinyorwa vakura, ichokwadi kuti nhasi tine mapindiro zvikuru kune manyoro ekare kupfuura vakanga vari 1500s. Aila nharo kuti yekare inokosha rugwaro kubva 1500s, Received Text kwakavakirwa mumanyoro 900-1200 remakore. Zvisinei, ichi Manyepo akaoma musoro. Chokwadi ndechokuti Received Text iri yakavakirwa mumanyoro ekare. Aila akabvunza mumutsetse yake yokupedzisira iyo manyoro aya. Tichave zvino kutsanangura izvi zvinyi. Asi kana tinotarisa kuti zvekare muchiGiriki, riri kubva 350 kusvika 400, saka ingaratidzika zvakasiyana kubva muBhaibheri ndima mumwe. Asi tikatarisa zvinyorwa kubva 500 kusvikira mangwanani 1500s sezvo Byzantine muzvinyorwa Mhedziso ruzhinji uye vari chibvumirano chakanakisisa.
Metzger anobvuma mu "The History of NT Textual Kuongororwa" ari Byzantine rugwaro akachengetedza munhu läsvariation kuti inogona zvomuzana remakore rechipiri kana rechitatu pashure kuwanikwa enhokwe manyoro, P45, N P46 uye P66.
Kwouzivi uye zvechitendero zvekungofungira chokuita zvakabudiswa nzira
Tisati kutarira ndima chaizvo, tinofanira kutanga kutaura kuti hatina kare nharo munyaya dzakawanda, etc. chokwadi Byzantine zvinyorwa. Zvinyorwa izvi vane kusachinja-chinja kwazvo uye ane - sezvatinoona - kuburikidza kupa Mwari akachengetedza pakutanga zvinhu rugwaro. Mwari akavimbisa kuti achengetedze Shoko rake, uye kana iri kwete Received Text iri akachengetedzwa mashoko aMwari, mashoko ari kuti Aila vanodavira kuti Mweya Mutsvene akachengetedza kuburikidza emakore? Zviri pachena kuti kubvira kare zvave vanhu, vakaita Origen, Eusebius, Westcott uye Hort zvokusarudza vakasarudzwa kuverengwa akadaro apo Jesu 'huMwari kujeka nokuti havana kutenda kuti Jesu aiva zvakafanana zvisikwa sezvo Baba. It chaizvo chaizvo kutarisirwa,
Kusarudza antibysantisk kusarudzwa nzira
Tichave zvino kupa chesamende muenzaniso sei zvakadaro zvokusarudza kusarudzwa kwacho akabvumirana munguva dzazvino. Kuti tinzwisise kuti kusarudzwa acho akaenda, uyewo tinofanira kuziva chinhu pamusoro varume vashanu vakanga vari kwema1970 akatipa itsva chikuru rwezuva uye nokushanda womuenzaniso vaishandisa. Imhandoi zvinyorwa nyasha vapepeti izvi shanu? Carlo Martini of Catholic Church akapa zvinyorwa Vaticanus, uyo anobva Alexandria. Bruce Metzger haana kushandisa Byzantine rugwaro sezvo aiona kuti yakaora. Allen Wikgren aida kushandisa kare kudzidzisa zvinhu kuedza kudzorera epakutanga. Izvi zvinoreva haana kuda kushandisa anowanika chinyorwa inowanikwa Byzantine mipumburu uye Received Text, asi aida kudzorera mashoko ane yepakutanga chimiro vakafunga vakura uye zvakawanda kuburikidza zvinyorwa kuti rakabva Alexandria. Matthew Black akafunga kuti Byzantine chinyorwa mhando akanga asiri chokutanga asi papera akabatanidza uye vamwe raAtadhi Ecclesiastical rwezuva. Pakupedzisira, tine Kurt Aland sezvo vose vane basa echiGiriki, NestleAland 1979 (Vanhu Bhaibheri uye nuBibelns hunokosha rugwaro), uye United Bible Societies rechiGiriki Text, 1975 (Bhaibheri 2000 dzinokosha ndima). Aland akanzwa kuti vakanga vasingagoni kushandisa Byzantine chinyorwa mhando, nokuti hachibatsiri kumisa epakutanga. Tinoona kuti zvose shanu vakabvumirana kuti vaizoedza kuti recreate zvakawanda epakutanga tsaru zvinyorwa kuAlexandria, uye akaona Byzantine chinyorwa mhando kuti gare gare akabatanidza nevamwe raAtadhi Ecclesiastical rwezuva. Uyezve, maererano zvose Black uye Metzger kuti mavambo evhangeri okutanga kupararira nomuromo isati akasaina nechepasi uye nokudaro akasimuka kururama. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) kukanganisa akaruramisa kubva kuchechi kune Byzantine manyoro, pasi pfungwa varume ava kuti.
Metzger zvakajeka yavo yokushanda wokuenzanisira mune rimwe remabhuku ake: "Kana remanyoro Baba yeChechi hwakasiyana ndima yeBhaibheri, kazhinji zvakanaka kuchigamuchira sezvo rakasiyana akazotevera rechitendero rugwaro (the Byzantine kana Vulgate)". (1. Metzger, peji 87) vakawana, wokusarudza akatorwa pana Fathers, asi tichaisa kunyatsoona kuti ichi nekubata uyewo hwaro kusarudzwa rugwaro muBhaibheri nokuti ndima.
It FNns dzinoverengeka ekare, rakanyorwa nemabhii makuru, waiva kukosha vapepeti izvi nokuti vose vakanga vachembera kwazvo. Kakawanda, zvinyorwa yembiru vakura pane vaya hwakaderera nyaya tsamba. In zvatakaparidza, hatina dzakaunganidza mashoko kunonyanya kubva mabhuku JA Moorman, Manyoro Early, veChechi, uye Authorized Version, (4. Moorman) uye bhuku Bruce M. Metzger vake, A Textual Commentary on Greek New Testament, (2. Metzger) pano ari mazita mamwe zvinyorwa akanyorwa nemabhii makuru:
Code Sinaiticus (ZEKARIA) kubva 300 wacho. Rine yose itsva.
Code Alexandrinus (A) na 400 kuti. Rine anenge ose NT.
Code Vaticanus (B) na 300 kuti. Rine zvinenge zvose itsva kunze okupedzisira mabhuku mana Testamende Itsva.
Code Ephraemi rescriptus (C) ne 400 kuti. Rine NT.
Code Bezae Cantabrigiensis (D) ne 400 kuti. Rine Gospels uye Acts.
Code Claromontanus (D) ne 500 kuti. Anoita Tsamba dzaPauro muchiGiriki uye chiLatin.
Code Basilensis (E) kubva 700 wacho. Rine Gospels.
Code Washingtonianus (W) ne 400 kuti. Rine Gospels.
Uyezve FNns nezvimedu kubva nhamba zvinyorwa zviri kunyange vakwegura uye inonzi enhokwe manyoro. Tichave zvino nokutarisa imwe mundima dzeBhaibheri kuona nekubata womuenzaniso, izvi varume vashanu rikashandiswa.
Jn. 7: 8 achiri chandanga zvimwe zvinyorwa
In Jn. 7: worusere Jesu anoti mundima 8 kuti arege kukwira kumutambo muJerusarema uye mundima 10 panoti kana vakoma vake vakanga vakwira kumutambo, iye akabva ipapo. Mipumburu yakawanda shoko asi. Shoko kuchiri kukosha nokuti kana chinoshayikwa, Jesu akataura asina chokwadi. Sezvo shoko asi FNns mune zvinyorwa zvakadai yenhokwe 66 uye 75 uye rugwaro nevatsoropodzi 'kufarira manyorero Vatican, vanofanira kunge akasarudza läsarten. Pano tinogona kuona Pfupiso mukuru nemanyoro:
Tinoonawo muunganidzwa kutsigira kunyange kuva zvikuru pakati Manyoro ekare kusanganisira yenhokwe chinyorwa P66 uye P75 kubva 200. wacho. Maererano vapepeti shanu akatipa itsva inokosha rugwaro muna 1975, akabva akapa Metzger yakabudisa bhuku umo paainyora mashoko sarudzo vakaita chimwe nechimwe cheBhaibheri ndima. Pano anonyorera zvinotevera mashoko:
"The chinyorwa asi aivapowo mangwanani kuderedza kuti kusawirirana pakati ndima 8 10." (2. Metzger, pp. 185)
Iyi haisi nesayenzi mashoko, asi kunongova kubvuma pasina uchapupu. Sei wafungidzira izvi vapepeti Bhaibheri kuti vachiri zvaishaikwa kubva pakutanga? Well nekuti epakutanga raiva zvikanganiso, maererano navo, pamwe nemhaka zvokuudzwa nomuromo, vaida kudzorera mashoko pa- chimiro kunyange kana zvakanga zvakaipa. Vose Byzantine rwezuva uye Vulgate ndiyo yakazotevera Ecclesiastical chinyorwa maererano vapepeti izvi. Asi wadii kubvuma kuti kunyange vaivapo kubva pakutanga kana zvavo kufarira manyorero, iyo Vatican, uye vaviri nenhokwe zvinyorwa vane shoko asi kuti zvechokwadi? Nokuti avo yakadzokororwa rugwaro yakasiyana akazotevera yechitendero rugwaro sezvo Vulgate. Mhinduro ndeyokuti izvi shanu vapepeti kushanda muenzaniso kune zvose zviri akati kwete pakupedzisira kwakanga kutevera Vatican, asi akanga apa zvose kwete kutevera "yechitendero chinyorwa" muchimiro Byzantine zvinyorwa. Kwete akatevera Byzantine rugwaro kuti kereke yechiKristu nokutendeka trad akatungamirira anopfuura gumi emakore akanga kukosha kupfuura zvimwe. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa. Zvakanga kupfuura zvinonyatsorehwa chinyorwa zvinhu uye zvakanga zvakakosha kupfuura zvavo kufarira manyorero Vatican akataura pamusoro pavo. Yakanga iri antibysantiska pezvaaitsigira kwaisava nevamwe chinhu izvi vapepeti shanu chinyorwa vakasarudzwa.
Mark. 1: 2 kana vaporofita muporofita Isaya
In Mark. 1: 2, mubvunzo ndewokuti kana kuva 'muporofita Isaya,' kana 'vaprofita'. Kune prices mbiri, yokutanga kubva Maraki uye mumwe anobva Isaya. Saka, zviri zvakarurama kunyora vaprofita. Heino pfupiso mukuru nemanyoro:
Metzger anopa zvinotevera mashoko kuti nei vakasarudza muprofita Isaya:
"Saka nyore kuona kuti nei vaya vaikopa izvozvo hwachinja mazwi" Muporofita Isaya "(the kuverengwa kuti FNns iri kare zvapupu chokuArekizandiria uye Western chinyorwa mhando) kune mamwe akawanda Nhanganyaya mashoko" vaprofita. "(2 Metzger, peji . 62)
Maererano Metzger, saka zvakanaka kuti kusarudza "muprofita Isaya," kunyange kana FNns vazhinji pakati muzvinyorwa uppercase uye lowercase tsamba vachitsigira vaprofita sezvo Isaya muprofita yakasiyana akazotevera Ecclesiastical chinyorwa (kureva Byzantine). Saka chaizvoizvo hapana yesayenzi anoshanda womuenzaniso vakatevera, asi bedzi zvokufungidzira, yokuti dzeBhaibheri raiva zvikanganiso kubva pakutanga. Cherechedza kuti manyorero ZEKARIA (Sinaiticus), iro rine zvikanganiso zvakawanda, zvakafanana kukanganisa mu Matt. 13:35, apo uyewo ndiye muporofita Isaya, asi akatorwa kubva muPisarema 78: 2nd Zvisinei kukanganisa uyu haafari kana paiva nezvimwe zvinyorwa pamwe kukanganisa chete Greek.
Mark 9:42 Ani naani anotenda kwandiri
Mark 9:42 Asi ani nani unogumbusa umwe wevacheche ava vanotenda kwandiri, ndiro shoko kwandiri Haatauri mune zvimwe zvinyorwa. Heino pfupiso yokuverenga zvinhu:
Tinotarisa pfupiso yacho rutsigiro mashoko 'ini' simba chaizvo pakati zvekare kusanganisira Vatican uye FNns tiine Vulgate uye ruzhinji manyorerwe uppercase uye lowercase tsamba. Asi Metzger akanyora zvavakataura kuti FNns Zvinogoneka kuti mashoko ave zvaisanganisira kubva zvakafanana pane muna Mateo 18: 6th Nokuda kwechikonzero ichi, vakanga vasingadi kuti mashoko aya uye akazviisa muzvikomberedzo. Asi chikonzero chikuru havafaniri kupa zviri chaizvoizvo yavo antibysantiska kushanda muenzaniso: "Kana FNns kusawirirana, zviri zvikuru kusarudza rugwaro akasiyana akazotevera vezvitendero wenyaya, kureva ari Byzantine chinyorwa. "(1. Metzger, p. 87)
Matt. 5.22 sakodzera
Asi ndinoti kwamuri: Ani nani anotsamwira umwe wake pasina chikonzero chikonzero, anova nomutoro wechikwereti kutongwa. Heano mashoko pasina chikonzero chikonzero haiwanikwi muzvinyorwa zvechiGiriki. MuchiGiriki, rinongova rimwe shoko. Heino pfupiso:
It FNns rutsigiro simba pakati zvechiGiriki vakwegura uye kunyange mashoko kubva Fathers remakore rechipiri Church Kuvira pasina chikonzero chikonzero zvechokwadi asi Metzger anonyora izvi nemashoko ake:
"Paunenge uchiverenga" pasina chikonzero chikonzero "kwakapararira kubvira muzana remakore rechipiri zvichienda mberi, ndizvo vanowanzoguma kuti shoko rakawedzerwa nomunhu vaikopa chinyorwa kupfavisa pamberi rugwaro kwokuomerwa, pane shoko angadai akasiya se kufanira." (P . 11, Metzger 2)
Metzger nevamwe vapepeti chete ona zvikonzero nei shoko inofanira kunge akawedzera, asi haasi yakazarukira yokuti munhu vaikopa kubuda shoko. Nei kuita sarudzo iyi? Kana iwe unoziva kwavo antibysantiska kushanda muenzaniso saka iwe kunzwisisa sei. Ivo sarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa (kureva Byzantine). Chimwe chikonzero akadarikira pasina chikonzero chikonzero ndechokuti kereke baba Origen akanga manyoro kuti akanga ichi, asi vakafunga pasina chakanaka chikonzero chakawedzerwa. (3. Burgon, pp. 359-360)
Lk. 2:33 Joseph uye baba vake
Zvimwe zvinyorwa vane "Josefa namai vake vakashamisika ..." apo vamwe zvinyorwa vane "baba vake naamai vakashamisika ...". Kana paine kuva Josefa uye baba vake zvikuru tichifunga mhandara. Heinoi pfupiso kunze:
Tinoona pfupiso kuti vazhinji vechiGiriki muzvinyorwa uppercase uye lowercase tsamba anotsigira kuti Josefa, uye vazhinji pakati mumanyoro ekare Latin. In Tatian muunganidzwa Evhangeri ina sezvaakaita makore anenge 170, anoti Josef. Asi Cyril muzvinyorwa Jerusarema, anoshanda ari pakati 300 anoti baba vake.
Metzger rinoti ivo (kureva, vapepeti shanu) tenda kuti Chechi akaruramisa kukanganisa kudzivirira mhandara. (2 Metzger, pp. 111-112) It FNns zvekare izvo zvose anotsigira Josefa uye baba vake. Haugoni kuratidza chinhu, asi unofanira kusarudza mumwe nzira. Metzger nevamwe vapepeti vanosarudza pasina uchapupu baba vake pamwechete kururamiswa kuti mhosva paiva kubva pakutanga uye ipapo akaruramisa Chechi wokutsauka. Asi "kukanganisa" aivapo kubva pakutanga, zvino, munhu zvokufungidzira kunobva unproven kubvuma kuti zvikanganiso rwoga kunge raitika zvokuudzwa nomuromo. Uyezve, zviri mberi chinhu unproven yokufungidzira kuti kuchinjwa kwakaitika chete nomuromo. Vakaramba kutevera zvavo antibysantiska vachishanda wokuenzanisira, kusarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa", kureva ari Byzantine chinyorwa.
Matt. 6: 1 Gift kana wakanaka mabasa
Kunyange zvazvo kutsigirwa hakusi simba chipo pakati dangwe Manyoro saka FNns mashoma zvekare kuti kuzvipa rutsigiro yayo. Uyezve FNns chipo pakati Tatian uye Origen zvakanyorwa. Tatian akanga achishingaira mukupera 100 uye Origen mukutanga 200 wacho. Mumwe hakufaniri akakurumbira zvakawedzerwa vatsoropodzi kuziva kuti läsvarianten "chenjera kuita mabasa akanaka" ari kufona zvakaipa izvo zvinopesana dzimwe eBhaibheri. Sezvo zvose nzira dzinogona kurondwa kudzokera mangwanani yechiKristu, chisarudzo chinofanira dzinongoitika kuziva chipo sevanorevesa sezvo rugwaro zvinofanira kuenderana nedzimwe ndima dzeBhaibheri. NdiShe pachake uyo patinofemera kunze zvose Magwaro. Asi zvinosuruvarisa sarudza vapepeti izvi wenhema pamberi zvakarurama. Vakawanda vapepeti vayo kuti paiva zvikanganiso mundima nokuda zvokuudzwa nomuromo yeChechi kubva kugadziriswa. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) Asi shoko raMwari zvakapfuudzwa pasi nomuromo nevanhu inhema kuti akapikisa naShe pachake paanoti "Rugwaro rwose akafemerwa naMwari." (2 Tim. 3:16)
Mark. 10:24 kuvimba nepfuma
An Ruzhinji rwakapindura zvechiGiriki uye Latin yekare kutsigira kuti zvisipo mashoko ari muzvinyorwa zviviri Vaticanus uye Sinaiticus. Metzger anopa zvinotevera mashoko: The nekuomarara aJesu akanga kupomhodzwa pakatanga imwe kvalifkation inorambidza generality kwayo uye vakauya nayo pedyo akapoteredza rugwaro. (2 Metzger, p. 90) Yakanga isiri zvinonakisa manyoro zvinhu kuti akasarudza sarudzo dzavo pasina fembera kuti kunoenderana wavo kusina antibysantiska kushanda womuenzaniso.
Lk. 9:35 achida kana vakasarudzwa
The uchitikurudzira manyoro acho rinopa rutsigiro Mwanakomana anodiwa. Metzger zvakataurwa ndiko:
Pakutanga muna Luke kunge akamira Akasarudzwa, kunoitika pano chete muTestamende Itsva. Kusarudza wechipiri, iyo inosanganisira zvakawanda zvakajairika okuti, imhaka kunyora pamwe Mwanakomana FL ätning anodiwa. (2. Metzger, pp. 124)
Mfråga isu: Kubva chii naJesu anosarudzwa? Sei mumwe chete mumwe chepakutanga kwave vakasarudzwa, tinofanira Mwanakomana kusarudzwa? Tine inotsiva maviri vari rinenge kusarudza kubva. Metzger zirokwazvo zvichatoitika kuti pakutanga yave akasarudzwa. Kana ukatenda kuti Magwaro Matsvene akafemerwa naMwari, asi mashoko Reusanganidzo kubva nomuromo nokusakwana kwevanhu, ipapo FNns zvikanganiso zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Ipapo chichava musoro kutaura kuti Personne akati: "Bhaibheri ndiro kubva pakutanga uye rose basa womunhu" (8 Swedish Bible Society Annual) Personne aiva mumwe wevarume vatatu akatipa 1917 Bhaibheri chechi. Kana uchitenda kuti Personne, Bhaibheri ndiro basa murume zvino unogona kusarudza Akasarudzwa. Asi kana uchitenda kuti Rugwaro Mutsvene ndiMwari-achafema uye akachengetedzwa, ipapo sarudza Mwanakomana Wangu Wandinoda.
Jn. 6:47 Unotenda kwandiri
Zvinonyatsorehwa manyoro acho rinotsigirawo ayo mashoko nezvangu ndehwechokwadi, kunyange zvazvo mipumburu mishomanana ekare echiGiriki dzinosiya mashoko aya. Tatian akaita muunganidzwa zvomuEvhangeri ina makore 170, apo iye aneni. Metzger anopa zvinotevera mashoko:
Kuwedzera pangu zvose zvakasikwa uye hakudzivisiki. Kushamisika ndechokuti yakati vakawanda vaikopa muedzo. Kana mashoko akanga pakutanga aivapowo mundima, saka hapana tsananguro zvakanaka kuti nei mashoko akanga kusiyiwa. (2. Metzger, pp. 183)
It FNns kwete zvinyorwa zvakawanda kutevedzerwa kukanganisa ichi. Zvinonyatsorehwa manyoro acho anotipa maviri zvokusarudza. Hapana anogona kuratidza kuti mashoko akanga kubva pakutanga kana asipo. Vapepeti shanu mberi sezvo ake antibysantinska kushanda wokuenzanisira, kusarudza rugwaro dzikatsauka "akazotevera Ecclesiastical chinyorwa" riri nhandare kuti vanogona chete kuona chimwe zvinobvira chikonzero, kureva kuti vaya vaikopa chinyorwa kugadziriswa chii musingagoni pano. Vaisafanira akazaruka kune nani pachena pfungwa yokuti munhu vaikopa achisuwa mashoko maviri iwayo nokusaziva uye ipapo akatamisira kukanganisa uku kune vamwe makopi yenyu. Kana mashoko zvisipo saka panoti aninani anotenda ane upenyu husingaperi, asi zvino kushayikwa chokwadi zvinokosha kuti tinofanira kutenda muna Jesu kuti ave noupenyu husingaperi.
1 VaK. 15:47 Ishe kubva kudenga
Kana kereke madzibaba sezvinotevera madzibaba kereke pamwe naShe zvaakanyora: Tetullianus, Hippolytus uye Victorinus pamusoro Pettau kubva 200 uye Basil Mukuru kubva 300 kuti. Zvinotevera Vanababa havana Ishe zvaainyora: weSaipuresi kubva 200, uye Hilary pamusoro Poitiers uye St. Athanasius kubva 300 wacho. Ndezvipi unofanira kusarudza? It FNns rutsigiro vokutanga vaviri zvokusarudza, zvose kubva chechi madzibaba Zvinyorwa zvakare zvechiGiriki. Mumwe chinyorwa dzechitendero, kureva Byzantine Manyoro vane Ishe nevamwe vezvitendero wenyaya, kureva Vulgate mipumburu havana Ishe. Metzger tsanangudza sarudzo yavo siya Jehovha. "Kana shoko (Ishe) aimbova ipapo, saka FNns pasina chikonzero nei tichifanira asiyiwa panze." (2 Metzger, p. 501-502) Zvakare zvinova pachena kuti havasi yakazaruka nokuti kunogona transcription zvikanganiso, kuti mumwe munhu akakopa kurashikirwa shoko iri. Chimwe chikonzero chingava chokuti Eusebius, uyo akatora maBhaibheri kuna Constantine. Eusebius vasingatendi kuti Jesu akanga ari Mwari. Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22) Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22) Sezvo pane kare vaiva kusiyana-siyana manyoro, sezvo FNns uyewo mukana kuti akasarudza zvinyorwa zvakanga inoenderana zvaanotenda. It FNns chinyorwa masayendisiti vanofunga maviri Manyoro ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatican) vakwegura mabhaibheri izvi Constantine zvarayirwa Eusebius. (7. Skeat, pp. 21-22)
1 Tim. 3:16 Mwari wakaratidzwa panyama
Pano mubvunzo ndewekuti kuchava chinhu). Kusimbiswa kwakasimba chaizvo kuti Jesu ndiye Mwari, Mwari, kana iye (kureva. Wakaratidzwa panyama dzidziso dzakatsauka akawanda, akadai zvaJehovha, zvaizova zvakaoma kukunda vatsigiri chokwadi ichi kuti Jesu ndiye Mwari wakaratidzwa panyama akanga asiyiwa vakagadzikana . Several chechi yokutanga kumadzibaba kuti zvaakanyora, asi kereke baba Gregory weNyssa, anoshanda 300 wacho, Mwari mune zvavainyora. Maererano Metzger, vakafunga kuti nokururamiswa shoko, sezvo aidhinda angava pfungwa yakanga nesipereti zvakaipa uye akashandura nayo Mwari, zvimwe zvaungaita kuti Metzger nevamwe vapepeti akanga akazaruka munhu wose kuti aidhinda dzakachinjwa kuna Mwari kuti "kupa mukuru ndizvo zvakarurama." Metzger anotaura kusanganisira Origen rutsigiro kuti kuti, asi tinoziva kuti Origen haana kutenda dzidziso yoUtatu. (2. Metzger, p. 573-574) Paiva hondo mwari panguva 300 uye hazvisi kure Hadzisi kufunga kuti pane masimba izvo vaida kubvisa Mwari kubva murugwaro.
Vapepeti mashanu idzva chikuru chinyorwa pamusoro pfungwa kuti chikamu ichi yose huru rugwaro Evhangeri yaMako ndiyo chinamatidzwa. Kuedza kwakaitwa kubvisa zvose izvi gumi ndima muBhaibheri, asi zvino akasarudza vaverengi veBhaibheri vakawanda kwete kutenga shanduro. Saka, regai angatsunga shanduro dzemazuva ano kubvisa izvi gumi ndima, asi kutaipa kuti chiri kuwedzera kuti haisi Gospel yepakutanga, iyo inoshanda, nokuti. Somuenzaniso. 1917, Bhaibheri 2000 King James uye nuBibeln. Uchapupu kuti ndima idzi zvechokwadi ndiye simba chaizvo. It FNns 620 zvechiGiriki ane Mark, muna 618 kubva FNns izvi izvi gumi mavhesi. Zviri chete maviri zvinyorwa ZEKARIA (Sinaiticus) uye B (Vatinanus) kuti vari kurasikirwa. An mangwanani chinyorwa kubva iyoyowo, A, vane vose gumi mundima. Manyoro ose rweLatin vane mavhesi kunze K, iro rine pfupi painoperera. Vechechi vokutanga mashoko kubva izvi gumi ndima, kubva Justin Martyr ca. 150 CE .. Kuvira uye Irenaeus anotora gore 180 ndima yose kubva Mark. 16:19. Sei ndima ichawedzerwa kana zvakavapo Sinaiticus Vaticanus asati akanyorwa makore 200? Uyezve, vaviri zvinyorwa izvi, ZEKARIA uye B anosiya ndima, kusiya hombe chinhu, sechiratidzo chokuti chisipo eBhaibheri. Zvimwe vaifungidzira fnna zvisipo rugwaro unyore ikoko pashure. Text Vatsoropodzi vanoti kuti okupedzisira gumi ndima akasiyana werudzii nekuti vaviri zvinowanzoitika mashoko zvisipo, shure / musana uye pakarepo, asi rugwaro mutsvakurudzi Burgon akaita havawanzoiti nyaya uye akawana kuti mashoko aya uyewo asina dzimwe muzvitsauko Mark akawanda. Naivowo vanoti kuti Eusebius uye Jerome asina ndima idzi dzakawanda muzvinyorwa ake. Asi ichi ndicho zvikuru dzisingapindirani, nokuti zvikasadaro Vanoti vanotsigira itsva inokosha rugwaro hachisi nhamba zvinyorwa kuti zvakakosha. Asi iyi, nhamba kamwe aaiitawo. It FNns hapana vavo nharo woramira yakaoma ongororo. Zviri chaizvoizvo rakanaka kure Hadzisi pfungwa dai mumwe kuwana kuwedzera gumi ndima, kana uchiziva kuti migumisiro vari kana kuwedzera kana kutapudza.
Harisi yose manyoro acho kana mashoko kumadzibaba chechi akaita kuti Metzger nevamwe vapepeti vaiona ndima idzi vakawedzera asi avo vanoshanda womuenzaniso rwaiumbwa mitemo maviri:
Apo B (Vatican) uye ZEKARIA (Sinaiticus) vari akabvuma, asi zvakasiyana nemamwe zvinyorwa tinotevera izvi zviviri.
Apo FNns kusiyana saka zvakanaka kuti kusarudza rugwaro akasiyana akazotevera vezvitendero wenyaya, kureva Byzantine zvinyorwa.
Hatina vaenda ikozvino kuburikidza gumi nendima kuratidza sei kusarudzwa rugwaro itsva inokosha chinyorwa akaenda. Vamwe ndima idzi chokuita kupokanidzana uye vamwe nemashoko rutsigiro Jesu huMwari. Rutsigiro zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinogona kuva rakasiyana nenzvimbo. Dzimwe rutsigiro pakati mukuru Manyoro akasimba uye dzimwe nguva simba. Asi zvikuru kazhinji Byzantine chinyorwa / Received Text rutsigiro kubva muzvinyorwa mumwe kana kupfuura chaizvo vakwegura Greek. Text Masayendisiti anoti nhasi tine kuwana zvinyorwa vakura uye nani pane vakanga vari 1500s, asi B (Vatican) akanga kare anozivikanwa 1500s uye ZEKARIA (Sinaiticus) chaizvoizvo hausi manyorero akanaka. Chinhu chinozivikanwa chokwadi chokuti FNns zhinji transcription zvikanganiso zviri chinyorwa ichi. hazvifaniri kunge ikoko manyorero zvakaipa zvakadai gave uence nayo akagashira idzva echiGiriki. Kunyange zvazvo Kuwanikwa zvinyorwa zviri nani nhasi pane vari 1500s, zvinova mubvunzo unokosha: Ndiani anofanira kusarudza? Vaya vari vaKristu uye vanodavira kuti Rugwaro akafemerwa naMwari uye akachengetedzwa nokuda kwaShe nokutungamirira kuti nguva yedu vachiita kusarudzwa orugwaro. Asi avo vasingatendi kuti Rugwaro akafemerwa, uye havatendi kuti Jehovha akakundisa rugwaro, vanoita mumwe vakasarudzwa. Nokuti kutenda zvokuudzwa nomuromo, zvinorevei kuti azvidzivirire kana FNns kusiyana acho, sarudza rugwaro akasiyana akazotevera Ecclesiastical wenyaya, kureva Byzantine. In pakudzokorora uku, tinogona kugumisa kuti kana kusarudza pakati Byzantine uye Vulgate manyoro saka vakasarudza tsaukai Byzantine murugwaro. Vaida pamusoro zvose kutevera zvavo kufarira manyoro B (Vaticanus), asi isu tinogona kuona nguva apo vakasarudza kubva chinyorwa ichi nokuti kunoenderana Byzantine mipumburu uye pakusarudzwa pakati kutevera B (Vatican) kana tsaukai Byzantine murugwaro, sezvo vakasarudza tsaukai Byzantine murugwaro. antibysantiska ichi kushanda womuenzaniso asina kudaro yaizivikanwa, mumwe anogona nezvavo rimwe remabhuku Metzger vake. (1. Metzger, p. 87) Izvi hazvisi nesayenzi basa muenzaniso asi kwakavakirwa ane musoro vasingafariri Byzantine manyoro uye Received Text. Akadaro sekuita womuenzaniso hakusi nesayenzi chete asi kutsutsa unbiblical nokuti kuteerera chipupuriro yeBhaibheri nezvake.
Kana vaKristu vanotenda kuti shoko raMwari riri patinofemera kunze uye wakasara vaifanira selection, sezvo akanga chepakutanga echiGiriki, razova FNns anomirirwa ari seboka manyoro acho, kureva ari Byzantine chinyorwa iyo zvino fck kuenderera Received Text. Asi munyama chose, itsva inokosha rugwaro, nezvikanganiso ayo uye kupesana makanga hwaro zvinenge zvose shanduro Swedish munguva kwema1900 uye mangwanani 2000 vake, kunze kwevaviri. Matanda Shanduro Karl XII Bible 1923 KJV, vose inobva Received Text. Chete muTestamende Itsva chokuita nokuchinja akapoteredza 3300 nzvimbo! Nokuti vaya vanoda kuziva zvakawanda, tinoratidza vachishanyira Website, bibel.se , apo unogona kunakirwa mavhidhiyo uye nyaya zhinji uye nharo.
Bo Hagstedt, sachigaro
Ona yapfuura zvikamu:
Bhaibheri - An zvisiri zvinhu rugwaro - chikamu 1 of 5
Bhaibheri - An zvisiri zvinhu chinyorwa - chikamu 2 of 5
Bhaibheri - An zvisiri zvinhu chinyorwa - chikamu 3 of 5
Bhaibheri - An zvisiri zvinhu chinyorwa - chikamu 4 of 5
Bhaibheri - An zvisiri zvinhu chinyorwa - chikamu 5 of 5
Reformation Bhaibheri Website: www.bibel.se
Ini Akatenga KJV | apg29
Bruce M. Metzger, The Text Testamende Itsva, Ndiyo Transmission, Corruption uye Restoration, 4th edition, Oxford University Press muna 1968.
Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on Greek New Testament, 2nd edition, Deutsche Bibelesellschaft / German Bible Society, Stuttgart, 8th rokudhinda. In 2007.
John William Burgon, The Revision Revised, kudhinda wechipiri, Dean Burgon Society Press, New Jersey, muna 2000.
JA Moorman, Early Manyoro, veChechi, uye Authorized Version, The Bible Ano Press, New Jersey, 2005. Moorman ave paainyora humboo FNns uye kunyange mashoko vanaBaba veChechi. Zvinotisimbisa akashandisa ndiye yakabudiswa Tischendorfs worusere, Nestle-Aland Shanduro 26, United Bible Societies Ref wechitatu muna 1975, mepu zvinyorwa mu The Text Testamende Itsva naKurt naBarbara Aland, CE Leggs Shanduro Matthew uye Mark, akatorwa akawanda vari akatorwa kubva Von Soden, iye uye Farstad, kuti Aland Pfupiso yebhuku eEvhangeri uye Hoskier raZvakazarurwa.
Matthew Black, Peake kuti Commentary Bhaibheri, Revised Edition 1962nd
Bruce M. Metzger, The New Testament, Its Background, Growth, uye Content, Abingdon Press, 1965th
TC Skeat, The Codex Sinaiticus uye The Codex Alexandrinus, London, British Museum muna 1963.
Mushumo Swedish Bible Society negore, maminitsi April 21 muna 1886.